यिनै हुन् साहसी, हिम्मतवाली पाइलट बहिनि जसले आफ्नो दाई को न्यायको लागि अब चाल्दैछिन् यस्तो कदम , घटना को वास्तविकता के हो ? - Nepali in Australia
February 24, 2021 February 24, 2021 adminLeaveaComment on यिनै हुन् साहसी, हिम्मतवाली पाइलट बहिनि जसले आफ्नो दाई को न्यायको लागि अब चाल्दैछिन् यस्तो कदम , घटना को वास्तविकता के हो ?
मोरङ ।मोरगं उर्लावारीमा भएको घटनाले अहिले सामाजिक सञ्जालमा मात्र होइन ठूला मिडियाहरुले पनि चासो दिएका छन् । उर्लावारीमा करिब २ महिना अघि निधन भएका प्रविण वस्तोलाको घटना थप रहस्य म भएको ।
उनको वहिनी सदिक्षा वास्तोला जसलाई पुजा भनेर पनि चिनिन्छ, उनले प्रहरी कार्यालयवाट गरेको लाइभ भिडियोमा प्रहरीले मिसिलमा नक्कली तस्बिर राखेको कुरा प्रसारण गरीदिएपछि अहिले सो घटना चर्चामा आएको हो ।
प्रहरीले फाइलमै गलत प्रमाण राखेर आफ्नो दाईको ज्या न लिने हरुलाई प्रहरीले नै संरक्षण गरेको आरोप प्रवीणको वहिनीको भनाई छ । उनले सो घटनाका बारेमा प्रहरीले नै छा नविन समिति गठन समेत गरिएको भएपनि आफुलाई त्यस बारेमा थाहा नभएको बताएकी छन् । इताजाखबर बाट